८ अर्बको आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेको बैंकको खुद नाफा २६.४१% बढ्यो - E-BreakingNews
Home Karobar ८ अर्बको आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेको बैंकको खुद नाफा २६.४१% बढ्यो
बैंकको हालसम्मकै ठूलो आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रक्रियामा रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.४० प्रतिशत बढी हो।
बैंकले गत वर्षभन्दा खुद नाफा २६.४१ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष यसैअवधिमा बैंकले ६७ करोड १ लाख ५९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा दुवैमा सुधार आएपछि खुद नाफा पनि माथि लागेको हो । बैंकले समीक्षा अवधिसम्म २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। अघिल्लो वर्ष बैंकले २० करोड निक्षेप संकलन गरी ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो।
बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। समीक्षा अवधिसम्म बैंकको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यो मुनाफा ९६ करोड १२ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।
यस अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानीबापत आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म बैंकले खुद ब्याज आम्दानीबापत १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो। बैंकले रिजर्भको आकार १०६.९७ प्रतिशतले बढाउँदै १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बनाएको छ। अघिल्लो वर्ष बैंकको रिजर्भ ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको थियो।बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ७.०६ रुपैयाँ रहेको छ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि बैंकले नागरिक लगानी कोषलाई अण्डराइटर (प्रत्याभूतिकर्ता) को जिम्मेवारी पनि दिइसकेको छ । नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रचर बैंक नेपालकै पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक हो । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अधिकृत पुँजी ४० अर्ब तथा जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आइपीओ बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी पनि २० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यो पनि, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ८८ लाख १९ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा रू. ४९ लाख ८ हजार रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कमनपीको नाफामा बृद्धि भएको छ । आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान लागेको उक्त कम्पनीले साउन १८ गते चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । ती दुई कम्पनीबीच गत पुस २ गते मर्जरमा जाने सम्झौता भएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष चौथो त्रैमासमा रू. ४० लाख ८९ हजार सञ्चालन घाटामा रहेको उक्त कम्पनीले गत वर्ष उक्त घाटा सुधारेर रू. ८५ लाख ५७ हजार सञ्चालन नाफा गर्न सफल भएको हो । रासस